युवा पत्रकार अनुपा को मृत्यु । - Prawas Khabar
युवा पत्रकार अनुपा को मृत्यु ।
चन्द्र कला आचार्य-बाके। युवा पत्रकार अनुपा सिंह राजवंशीको मृत्यू सम्बन्धमा पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले चासो देखाएको छ ।
रेडियो हुँदै टेलिभिजन पत्रकारितामा सक्रिय अनुपाको सोमबार राती नेपालगन्जको सुर्खेतरोडमा रहेको होटल सिग्नेट इन कृष्णामा नाच्ने क्रममा असामयिक निधन भएको थियो ।
घटनामा पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले चासो देखाउदै मंगलबार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीलाई भेटेर घटनाको निपष्क्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाका अध्यक्ष ठाकुरसिङ थारुको नेतृत्वमा गएको टोलिले सिडियोलाई घटनाको निपष्क्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेको हो ।
स्थानीय खजुरा गाउँपालिका निवासी २४ वर्षीया पत्रकार राजवंशी नेपालगञ्जस्थित टेलिभिजन र रेडियोमा समाचार वाचन गर्नुहुन्थ्यो ।
महासंघका अध्यक्ष थारुले पत्रकार अनुपाको निधनप्रति आफुहरु स्तब्ध बनेको भन्दै मृत्यूको निपष्क्ष रुपमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए । सिडियो केसीले पत्रकार अनुपाको निधनले आफुलाई दुखी बनाएको भन्दै घटनाको निपष्क्ष रुपमा छानविन गरिने प्रतिबद्वता जनाए ।
प्रहरीले मृतक पत्रकार सिंहको शव आजै परीक्षण गर्न भेरी अञ्चल अस्पताल पठाएको छ भने घटनाबारे अनुसन्धान पनि शुरु गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक टेकबहादुर तामाङले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र परीक्षणपछि पत्रकार राजवंशीको शव आफन्तलाई बुझाइने छ भन्नुभयो ।
संचालनमा आउँदै कलंकीको ‘अन्डर पास’
युएईमा नेपाली चेलीको दुविधाः आममाफी त पाइयो, जागिर कसरी जोगाउने ?
उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई भने-दोहोरो कर तत्काल हटाइयोस्
तिब्बतको चमत्कार !
चिन्ता ग्रस्त जनता चिन्ता मुक्त नेता
दिनसम्मको मौसम, भारी वर्षाका कारण बाढी पहिरो जानसक्ने चेतावनी
भुकम्प पिडित गोर्खा निवासी दल ब. लाई सहयोग को अपिल।।